भीडबाट अलग रहनुहोस्! कसरी तपाईंको सानो व्यवसाय लोगो पप बनाउने - Print Peppermint
भीडबाट अलग रहनुहोस्! कसरी तपाईंको सानो व्यापार लोगो पप बनाउने
नोभेम्बर 28, 2019 | व्यापार, लोगो डिजाइन, सुरूवात
के तपाइँ तपाइँको लोगो सम्भव भएसम्म धेरै सम्भावित ग्राहकहरु द्वारा तुरून्त पहिचान गर्न चाहानुहुन्छ? यहाँ छ तपाईंको सानो व्यवसाय लोगो पप कसरी बनाउने।
तपाईंले आफ्नो सानो व्यवसायको लोगोमा कती सोच राख्नुभयो?
यो मात्र हो कि तपाईको लोगो को भीड देखि बाहिर किसीको आँखा पक्रने को लागी महत्वपूर्ण संग पक्का गरी रहेको छ व्यापार कार्डहरू र वेबसाइट तर यो ब्रान्डि ofको एक अनिवार्य अंश हो।
एक कडा लोगो तपाईको अग्रणी खुट्टा हो ग्राहकहरुका साथ, विशेष गरी ती व्यक्ति जसले अहिलेसम्म तपाईको वेबसाइट वा भौतिक स्थान देखेका छैनन्।
पढ्नुहोस्, र हामी तपाईंलाई उत्कृष्ट लोगो बनाउनको आवश्यक तत्वहरू सिकाउनेछौं।
यसलाई साधारण राख्नुहोस् ...
केहि आइकॉनिक लोगोहरूको बारेमा सोच्नुहोस् जुन तपाईंलाई याद हुन सक्छ। पेप्सी, कोका कोला, एप्पल, म्याकडोनाल्ड। तिनीहरू सबैको एउटा ठूलो कुरा समान छ। तिनीहरू तुलनात्मक रूपमा सरल छन्।
समय बित्दै जाँदा, उदाहरणका लागि, एप्पलको पुरानो इन्द्रेणी लोगोको विकासले गर्दा उनीहरूको प्रारम्भिक लोगोको साधारण कालो रेन्डडिशन भएको छ।
यसलाई सरल राख्नुको कारण, राम्रो ... सरल छ। जब तपाइँको लोगो संग जोडिएको जटिलता को एक टन छैन यो तुरून्त चिन्न योग्य बनाउँछ।
त्यो एउटा सानो व्यवसायको लागि धेरै जस्तो न लाग्न सक्छ, तर स्ट्यान्डआउट लोगो जुन साधारण छ तपाईंको व्यवसायले भविष्यमा सर्न खोज्दा तपाईंलाई ठूलो सहयोग पुर्‍याउँछ।
याद राख्नुहोस् कि ब्रान्डि just केवल बज मात्र होइन ... र यो केवल ठूला निगमहरूको लागि मात्र होईन। एउटा सानो रेस्टुरेन्ट पनि ब्रान्डि some मा केहि गम्भीर प्रयास राखेर एक टन मूल्य प्राप्त गर्नेछ।
केको लागि सम्भवत: साधारण लोगो डिजाइनको एकदम उत्तम उत्तम उदाहरण भनेको नाइके सफासको बारेमा सोच्नुहोस्। यो वास्तवमै मूल परिवर्तनबाट केहि परिवर्तनहरू हुँदै गयो जब सम्म यो नुहाई मिल्दैन।
न केवल swoosh सजिलै चिन्न योग्य छ यो पनि धेरै लुक्ने गरी उनीहरूको धेरै उत्पादनहरु मा राख्नको लागि सक्षम छ।
विश्वको सबैभन्दा ठूला निगमहरूबाट पृष्ठ लिनुहोस्, यदि तपाईं हेर तिनीहरूको लोगोहरूमा तपाईं छिटो फेला पार्नुहुनेछ कि उनीहरूको विशाल बहुमत समयको साथ सरल र सजिलो भएको छ जबसम्म उनीहरू सजिलै चिन्न सकिने प्रतीकहरू नहोउन्जेल हामी आज जान्दछौं।
… तर धेरै सरल छैन
यदि तपाईं एकदम सरल हुनुभयो भने, विशेष गरी पहिले नै पहिलो स्थानमा ब्राण्ड पहिचान बिना नै, त्यसपछि तपाईं आफैंमा डमिंग गर्दै हुन सक्नुहुन्छ यदि तपाईं अति जटिल हुनुभयो भने।
यहाँ कुरा यो छ: तपाईं आफ्नो लोगो जेनेरिक देख्न चाहनुहुन्न जब तपाईं यसलाई बाहिर राख्नुहुन्छ। तपाईंले अरू कसैको लोगोलाई दोहोर्याउनु हुँदैन।
डिजाइनमा असंगतताको एक मान्यता मान्यता राख्नको लागि एक उत्तम तरिका हो। केहि स्पर्श मात्र अप्रत्याशित राख्नुहोस्, विशेष गरी यदि तपाईंको लोगोमा तपाईंको कम्पनीको नाम समावेश छ।
केवल सानो स्पर्शले तपाईलाई जहाँ सजिलै जान आवश्यक छ त्यहाँ पाउन सक्दछ, एक पत्र तपाईको व्यवसायसँग सान्दर्भिक केहिमा परिवर्तन भयो, उदाहरणका लागि, वा भर्खरै एउटा नयाँ डिजाइन पत्र जुन बाहिर उभियो।
लक्ष्य नयाँ ग्राहकहरू र विगतका व्यक्तिहरू दुवैबाट सजिलै पहिचान हुनु हो।
धेरै रंगहरू प्रयोग नगर्ने प्रयास गर्नुहोस्। यो चीजहरू सरल राख्नुको साथसाथै हातमा जान्छ तर अन्तमा समान चीज हुँदैन।
तपाईले प्रयोग गरिरहनु भएको र colors्गहरूको संख्या सीमित गर्नुका साथै तपाईले पनि रंगहरू कसरी कसैलाई महसुस गराउन ध्यान दिन सक्नुहुन्छ।
लागू गर्दै आधारभूत रंग मनोविज्ञान तपाईंको लोगोको डिजाईनमा कार्यहरू गर्ने उत्तम तरिका हो। जहाँ तपाईं पनि मार्केटिंग गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा सावधान रहनुहोस्, यद्यपि सांस्कृतिक भिन्नताले पश्चातहरूले डिजाइन प्रक्रियाको बखत लिने केही चीजहरू परिवर्तन गर्न सक्दछन्।
उदाहरण को लागी, यदि तपाइँको लक्ष बजार मा चीन, साथै संयुक्त राज्य अमेरिका र यूरोप समावेश छ भने केहि रंग को धारणा स्पष्ट फरक हुन सक्छ।
अर्कोतर्फ, एउटा सानो स्थानीय व्यवसाय सांस्कृतिक भिन्नताको लागि चिन्ताको विषय होइन।
यहाँ ठूलो कुरा तपाईले प्रयोग गर्ने रंगहरूको संख्या सीमित गर्नु हो। यदि तपाईं केहि अलि बढी जटिल कुरा चाहानुहुन्छ भने, त्यसपछि तपाईं एकल र aको सट्टा ग्रेडीएन्ट प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ, तर सामान्य, अधिकतम तीनको साथ साधारण र colorsहरू सामान्यतया जाने बाटो हुन्।
यदि तपाईं तीन प्रयोग गर्न छनौट गर्नुहुन्छ भने, तब तिनीहरूलाई कम्तिमा एउटा सीमित प्रयोगमा राख्न प्रयास गर्नुहोस्।
कम्पनी मान प्रदर्शन गर्दै
सत्य यो हो कि धेरै जसो ब्यापारहरु संग केहि प्रकारको मिशन स्टेटमेन्ट हुन्छ, यदि यो औपचारिक रूपमा अहिले सम्म कोड गरिएको छैन। जब तपाइँ लोगो "पप" बनाउँदै हुनुहुन्छ भनेर तपाइँ पनी यो निश्चित गर्न चाहानुहुन्छ कि तपाइँ प्रदर्शन गर्दै हुनुहुन्छ कि तपाइँको कम्पनीले के गर्छ र के त्यसको मोल गर्छ।
यो विशेष गरी नयाँ व्यवसायहरूको लागि महत्त्वपूर्ण छ। जबकि हामी सबैले नाइक सफास र एप्पलको लोगो बाहिरको "बाइट" लाई चिन्छौ प्रतीकहरुका वरिपरि यति धेरै भयो कि उनीहरु जेनेरिक देखिन्छन।
एक स्टार्ट-अप वा सानो व्यापारको रूपमा, यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईं अलि अलि टाढा जानुहोस्। जे भए पनि तपाई घरको नाम होईन र यसको मतलब तपाईको लोगो के भइरहेको छ चाँडो र सजीलो गर्न सक्षम हुनु आवश्यक छ।
लाईटबल्बको प्यारा सानो स्केच कम्पनिको लागि राम्रो लोगो हुन सक्छ जुन इलेक्ट्रोनिक्स बनाउँदछ, तर यसले खाना पकाउने उपकरणहरू बेच्न चाहने व्यक्तिको लागि खासै राम्रो गर्दैन।
तपाईं यसलाई विभिन्न तरिकाले प्रदर्शन गर्न सक्नुहुनेछ, तपाईंको कम्पनीको नाममा लेखिएको फन्ट पनि राम्ररी सोचबिचार गर्नुपर्दछ।
फन्टहरूको बारेमा कुरा गर्दै, हास्य सान्स र पेपिरस जस्ता चीजहरूलाई वेवास्ता गर्नुहोस् जुन गम्भीरताका साथ लिनको लागि अलि धेरै कित्स्की देखिन्छ। यसको सट्टामा, तपाईं कोण र फन्टको झुकावमा ध्यान केन्द्रित गर्न चाहानुहुन्छ, साथै कसरी अक्षरहरू जडान गरियो यदि तपाईं स्क्रिप्ट शैली फन्ट प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने।
धेरै जसो कम्पनीहरूका लागि तपाईको लोगोमा कम्तिमा एउटा "प्रतीकात्मक" छवि समावेश गर्नु महत्त्वपूर्ण छ।
विकासको लागि कोठा छोड्नुहोस्
यदि तपाईंले माथिको लिंक क्लिक गर्नुभयो भने देख्नुहुनेछ यि धेरै कम्पनीहरूले उनीहरूको प्रारम्भिक लोगोबाट कति टाढा आएका छन्। यी अधिक जटिल लोगोहरू सुरुमा ब्रान्ड मान्यताका लागि उत्कृष्ट थिए, तर तपाइँले सधैं आफ्नो लोगोमा सुधार गर्न कोठा छोड्नु पर्छ।
त्यहाँ प्राय: जसो लोगोमा अधिक समयहरू छन् जुन प्रायः जसो तपाईंको व्यवसाय विस्तार हुँदै जान्छ।
यसैले हामी तपाईंलाई यो निश्चित गर्न सिफारिश गर्दछौं कि तपाईको लोगोमा कम्तिमा एउटा "आइकनिक" तत्व समावेश छ। तपाईको लोगोसँग जोखिम उठाउँदा सुरुमा खराब विचार हुनु हुँदैन किनभने तपाईसँग आफ्नो लोगो अलि बढी यादगार बनाउने र तपाईंको उत्तम खुट्टा अगाडी राख्ने मौका छ।
तपाईंको ब्रान्ड मान्यता समग्रमा बढ्दै जाँदा तपाईं अधिक र अधिक सरल गर्न सक्नुहुनेछ।
परीक्षण, परिक्षण, परीक्षण
त्यहाँ एक अर्को महत्त्वपूर्ण कारक छ जुन धेरै मानिसहरूले छोडिन्छन्: उनीहरूले आफ्नो लोगोको परीक्षण गर्दैनन्। चाहे यो एकदम नयाँ छ वा तपाईंको मूलबाट परिवर्तन गरिएको लोगो तपाईले यसलाई हेर्नु पर्छ तपाइँका उपभोक्ताहरू यसमा कस्तो प्रतिक्रिया देखाउँछन्।
तपाईं केहि फरक डिजाइनको साथ आउन सक्नुहुन्छ र जस्तै सर्वेक्षण सेवा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ अमेजनको mTurk जवाफको साथ आउन।
अझ राम्रो, यदि तपाईं अवस्थित व्यवसाय हुनुहुन्छ भने उनीहरूले मन पराउने मतदानमा हालको ग्राहकहरूलाई सानो छुट दिनुहोस्।
तपाईको लोगोको बजार जाँच गर्न यो निश्चित गर्न को लागी एक विशाल हिस्सा हो कि नयाँ एक लामो अवधिमा सफल हुने छ। याद गर्नुहोस् कि तपाईंको ग्राहकको राय तपाईंको आफ्नो समय भन्दा बढि महत्त्वपूर्ण कुरा हो।
उदाहरण को लागी, नाइके swoosh मा फर्कदै, कम्पनी को मूल मालिक यो धेरै मनपर्दैन। सहि उद्धरण थियो "मलाई यो मनपर्दैन, तर हुनसक्छ यो ममा बढ्नेछ।"
आज यो कर्पोरेट संसारमा सजिलैसँग पहिचान गर्न सकिने प्रतीक हो। यो अन्त मा तपाइँको ब्रान्ड को उपभोक्ता को मान्यता को बारे मा छ।
यदि तपाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विस्तार गर्ने योजना गर्दै हुनुहुन्छ भने विभिन्न बजारमा तपाइँको शब्द परीक्षण गर्न पनि एक ठूलो कारक हुन सक्छ। त्यहाँ भएको छ केहि गम्भीर फक्स पास वर्षौंदेखि कम्पनीहरूको विस्तार भएको छ।
तपाईंको सानो व्यवसाय लोगो र तपाईं
जब तपाईं नयाँ साना व्यवसाय लोगो सिर्जना गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईंले यो सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ कि तपाईं सानो विवरणहरूमा ध्यान दिँदै हुनुहुन्छ।
जे भए पनि तपाईको ब्यापारको आरम्भिक रिसेप्शनको ठूलो अंश तपाईको लोगोमा सँधै उकालो लाग्नेछ। धेरै व्यक्तिहरूको लागि यसले तपाईंको ब्रान्डको प्रारम्भिक धारणालाई असर गर्दछ।
यो सायद तपाइँको व्यवसायिक कार्डको प्रबल हिस्सा हो, यो तपाइँको वेबसाइटको शीर्षमा फ्याँकिएको हुनेछ, यो तपाइँको साइनमा इन्ट र मोर्टार व्यवसायको रूपमा काम गर्नेहरूको लागि पनि हुन सक्छ।
तपाईको डिजाइनमा सोच राख्न बेवास्ता गर्दै र "यो पर्याप्त छ" भन्ने कुराले आधुनिक संसारमा यसलाई काट्ने छैन।
एकचोटि तपाईंले आफ्नो लोगो पाउनुभयो, तथापि, समय आएको छ यसमा अभिनय गर्न। धेरै व्यक्तिको लागि पहिलो चरण भनेको उनीहरूको व्यवसायिक कार्डहरू प्रिन्ट हुँदैछ।
प्रश्न यो हो: के तपाईं एक मान्य ब्रान्ड तिर यात्रा शुरू गर्न तयार हुनुहुन्छ? यदि हो भने, किन आज सुरु हुँदैन एक पेशेवर डिजाइन संग? यो तपाईले गर्नु भएको सब भन्दा राम्रो निर्णय हुन सक्छ।
← किन तपाइँ तपाइँको अर्को विज्ञापन अभियान को लागी एक पेशेवर फोटोग्राफर मा लगानी को आवश्यकता छ
Crit महत्वपूर्ण कारणहरू किन ब्रान्डको निर्माणको लागि बलियो डिजाइन आवश्यक छ